Maxaa Na Kala Qabsaday Aniga iyo M/weyne Biixi, Prof-Abdi Ali Jama | Hangool News
Maxaa Na Kala Qabsaday Aniga iyo M/weyne Biixi, Prof-Abdi Ali Jama
October 11, 2018 - Written by Hangool
Hangoolnews:-Markii aan akhriyay comments-kii aad bixiseen; way mahadsan yihiin dadkii fahmay ujeeddada qoraalka, laakiin Qaar baa mooday in aan xil iyo waxaas u calaacalayo; waar kaas anigaa iskaga tagay; horena xildhibaan gole degaan oo aan cidina iga eryi karin baan iskaga tegay; immikana haddaan xil rabo sidan umaan hadleene, waxa aan hibanayaa waa qaabka la iila dhaqmay; qasab ma ah in xil la ii dhiibo; anigoo dhisay M/weynaha, ninka fahansan baan ahay in aanay qasab ahayn in xil la ii dhiibo; taas kuma doodayo; bal dhugo sheekadan si aad u fahanto waxan tabayo: ma aha xil; ma aha cunto; waa xurmo, waa in talo la i waydiiyo Iwm, laakiin kuwa iimaanka li’i qofkii wax tawdaba waxay u haystaan xil iyo cunto; Ilaahay ha soo hadeeyo!!!
Hawshii ololaha ee Guddoomiyaha uu ku noqonayay ayaanu galnay, aniga waxa ii dheera anigoo ka soo horjeestay raggii ugu tunka waynaa xukuumadda waagaas oo aad u diidanaa musharaxa aanu wadno; waxan joogay Komishanka Aidska; waxan u qirayaa gobonimo; gaar ahaan Xirsi iyo Aamina oo war kasta oo layga geeyay aan maalina i hiifin, xil ka qaadisna aan igu dayin; inkastoo aanay u suuragasheen in ay xilka iga qaadaan, maxaa yeelay, haddii aan dareen helo waxa iga go’nayd in aan is-casilo inta aanay xilka iga qaadin; hase yeeshee ma arag wax dareen ah, iyadoo waliba maalin kasta warkayga loo geyn jiray, gaar ahaan markii aan caddaystay taageeridda Guddomiyahii ku meel gaadhka ah ee waqtigaas. Ninka leh dan baad wadatay, waxan leeyahay xilkaygii iyo dantaydii ayaan dabka u saaray nin aan la hubin waagaas inuu guddoomiye noqonayo iska daa m/weyne’e; sababta aan nafta ugu hurayayna waxay ahayd anigoo ku qanacsanaa in la dulmayo!!! ama aan saxsanaado ama aan qaldanaado!!
waan soo gaagaabinayaaye, guushii baa la helay, xukuumaddii ayaa la soo dhisay; kuma jiro anigu; anigu m/weynaha waxan isku ogeyn haddii aad meel fiican ii weydo, ha igula soo tahanbaabin meel liidata, meelaha aan carabka ku dhuftay, xilkoodu wasiirnimo ayuun buu noqon karayay!!! isaguna ima odhan maya, ogolaansho ayaan ka dareemayay!!! haddii aanan khaldin akhriska body language-ka; laakiin muxuu ku diidi, xataa waxan ogolahay inuu iga reebo dawladdiisa’e!!! waxan ku adkeeyey in meel liidata ay ii dhaanto in aan keyd noqdo; kalmaddan istimcaalay waxay ahayd ciyaartoy reserve ah; taasi waxay ahayd maalmo yar ka hor intaan la codayn; guushii baa la helay, dheg jalaq iima siin oo dawladdii iguma soo darin; ciyaartoy reseve ah ayaad tahayna ima odhan; runtii cidhiidhi bay i galisay in aan labadaa midna ka waayo m/wynaha.